Ukuhambelana kweScorpio kunye neAquarius: ♥ Isibini esintsokothileyo - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuhambelana kweScorpio kunye neAquarius: ♥ Esi sisibini esintsokothileyo
Ukuhambelana kweScorpio kunye neAquarius yinto edidayo eza kufuna ukuba kwenziwe amadini amaninzi ukuze basebenze ixesha elide.
Ukuba umntu uyinkosi yamacandelo (i-Aquarius), enye ingcali kwimixokelelwane ehlala ihleli kwaye inamandla amakhulu (iScorpio),! Ukuzimela kunye nemfuno yenkululeko ye-Aquarius iya kuba buhlungu kwiScorpio, efuna ukudibana kunye nokusondelelana okungapheliyo. Ukunyenyiswa kunye nokulalanisa kuya kufuneka kwenziwe ukuba olu lwalamano luza kuhlala ngaphezulu kwenyanga. Aba babini baya kulawulwa ngumnqweno kwaye baya kusondela ngenxa yokuthanda okungummangaliso okuya kuhluma phakathi kwabo. Funda ezinye iinkcukacha ngokuhambelana kwazo kwaye ufumane amanqaku abo othando.
'IScorpio kunye neAquarius zizibonda ezahlukileyo ngokweemvakalelo.'
Amanqaku okuhambelana kweScorpio kunye neAquarius: 3/5
Le miqondiso yahluke ngokupheleleyo! Emsebenzini, iScorpio kunye neAquarius ubuntu bunokufikelela ngokulula xa betshintshiselana ngezimvo. Kunzima ngakumbi kubudlelwane beemvakalelo, nokuba ngamalungu osapho, izihlobo, okanye abathandi. U-Aquarius, umntu ozimeleyo, akemi bodwa ngokweemvakalelo. Bathanda wonke umntu! Ngesi sizathu, iScorpio sikhathazekile kwiminqweno yabo yemanyano. Njengesibini, ukutshintshiselana ngezinto ezibonakalayo kubalulekile kwiScorpio, ngelixa engqondweni ka-Aquarius, ukutshintshiselana kwengqondo kukhethwa. U-Aquarius uya kubuya umva kancinci ukuba baziva bexinekile yiScorpio!
Ngaba iScorpio kunye no-Aquarius banokuba nobudlelwane obuyimpumelelo?
Umona egameni leScorpio unokuhlasela le duo kwaye ubatyhalele ngaphandle. IScorpio iya kuba nexesha elinzima lokujongana nobume bendalo enobuhlobo buka-Aquarius kwaye ayizukubamba ukuvumela u-Aquarius azi. IScorpio siyathanda ukukhangela iimpendulo, kodwa kungekudala siza kufunda ukuba uAquarius akangomntu ubalaseleyo wokudlala nabo lo mdlalo. Ngokubanzi, eyona ngxaki yabo iphambili kukuba iScorpio ifuna ngaphezulu kodwa u-Aquarius akakwazi ukunika. Uyasenza isibini kwaye awuyi kuqatshelwa! Ewe uyakuhlala unesiphithiphithi kwaye ubudlelwane bakho buya kondliwa yimilinganiselo, iminqweno kunye nokuqala.
- Funda nzulu malunga nokungena Iinyani ezili-15 malunga neScorpio -
Awuthobeli iikhowudi ezifanayo konke konke, kwaye enyanisweni, ngamanye amaxesha kuya kuba nzima ukufumana enye nenye. Ke, ubudlelwane bakho bunokujika bube muncu ngokukhawuleza okukhulu! Obu budlelwane bunokuba nzima kwiiScorpios. Umona kunye nokudana kuya kuba kwi-ajenda. Ewe i-Aquarius izimele kakhulu kwaye ayixhasi kukodwa kweemvakalelo. IScorpio iya kubandezeleka ngenxa yokungakwazi ukuqinisekiswa kunye nokwenza ngaphandle kobudlelwane obunzulu kunye nefusional. Kwelinye icala, i-Aquarian iya kuba nobunzima ekuxhaseni imfuno yokuqwalaselwa yi-Scorpio ehlala ifuna ngaphezulu.
Phakathi kobuntununtunu obunzulu kunye nobushushu bomphunga, kunzima ukudibana embindini! Nangona u-Aquarius engaphezulu kunaniselwano ngokwasengqondweni, xa iScorpio sifuna ukungena phantsi kwamashiti, abatsho ukuba ukutshintshiselana ngezinto zenyama. Amaqabane angaphandle nawo ahlala amkelekile ekwenzeni uthando.
Esi sibini kuya kufuneka sonwabele iiyure zokuqala ze-adventure yabo eyi-100% ngaphambi kokuba iimfuno zabo kunye neminqweno yabo yobahlukanise ... Ngaphandle kokuba bobabini bakwazi yenza iinzame zokuqinisekisa nokuqonda omnye nomnye.
ukubala njani inani lobomi
Ngaba i-sagittarius kunye ne-pisces iyahambelana
Iimpawu zobuntu zetaurus
ukufumana indlela yakho yobomi
ubudlelwane be-aries kunye ne-aries
iihoroscopes zeveki ngeeveki